40 minamato manzwi ekutanga mutsva | MINYENGETERO MARI
Urongwa hwekuverenga Bhaibheri
Mauya!Log kupinda nekuda kwako
Chipiri, Gunyana 28, 2021
Pinda / Join
musha Pfungwa dzemunamato 40 Minamato yeminamato yekutanga kutsva
40 Minamato yeminamato yekutanga kutsva
Mufundisi Ikechukwu Chinedum
5 Iye anogutisa muromo wako nezvakanaka; kuti hujaya hwako huvandudzwe segondo.
Isu tinobatira Mwari wa kutanga kutsva. Zvisinei nekuti zvinhu zvakashata sei muhupenyu hwako, Mwari achakupa kutanga kutsva nhasi. Unogona kugona kutanga zvekare muhupenyu. Matambudziko mazhinji avakarurama, asi Mwari achamurwira kubva kwavari. Iyi 40 minamato inonongedzera ye kutanga kwayo ichakutungamira apo iwe uchinamata pachezvako kubva mukukwasira uye mukufambira mberi. Iyi minamato yenamato ichakupa simba iwe paunenge uchirwa hondo yemweya kupesana nemweya wekutadza, zvipinganidzo uye kusagadzikana, paunonamata aya manamato ekutenda, ini ndinoona Ishe vachikupa kutanga kutsva.
Kutanga kutsva kutanga kutsva, ndiMwari kukupa wechipiri mukana muhupenyu. Kutanga kutsva kunoreva zvakare kudzoreredza, Mwari anodzosera kwauri zvese izvo zvakabiwa naDhiyabhu kwauri. Kutanga kutsva kunorevawo kusimbiswa kwehumwari, Mwari vachikudzivirira pamberi pevaseki vako uye nekuvaratidza kuti zvechokwadi kumushumirwa hakuna kuita pasina. Munamato uyu unonongedzera kutanga kutsva uchaisa pagwara idzva muhupenyu, iwe uchagamuchira mhinduro dzepapo paunonamata iwe manamato ekutenda nhasi uye sezvakaita Gid rakashandura hupenyu hwaJabez, 1 Mbiri 4: 9-10. Nyaya yako inofanira kuchinja nhasi muzita raJesu.
KINDLY TARIRA EVERYDAYPRAYERGUIDE TV PAMWE YOUTUBE
1. O Ishe ,dyara zvinhu zvitsva muhupenyu hwangu muzita raJesu
2. O Ishe, bvisai zvakaipa zvakasviba zverima kubva muhupenyu hwangu muzita raJesu
3. Ndinobvisa mweya yese yasatani yekumira muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
4. Ishe, ndiitire Hondo yenyu yehondo muzita raJesu.
5. Rega kusasimba kwomweya muhupenyu hwangu kugamuchire kubviswa izvozvi, muzita raJesu.
6. Rega kukundikana kwega kwemari muhupenyu hwangu kugamuchire kubviswa izvozvi !!! Muzita raJesu
7. Rega kurwara kwese kuri muhupenyu hwangu kugamuchire kupora zvachose, muzita raJesu.
8. Rega mweya yega yega yekushushikana uye yekushungurudzika itadzise kubva muhupenyu hwangu ikozvino, muzita raJesu.
9. Ini ndinoremedza vese madhimoni vanomiririra hupenyu hwangu, muzita raJesu.
10. Rega izvo zvinonditadzisa kubva mukutanga vatange kupa nzira ikozvino, muzita rakasimba raJesu.
11. Rega zvese zvangu zvakavanzika zvemagetsi zvitange kubuda iye zvino, muzita raJesu.
12. Ini ndinozvibvisa pane vese vasina hushamwari muhupenyu hwangu muzita raJesu
13. Rega zviitiko zvese zvemadhimoni parizvino zvinokanganisa hupenyu hwangu zvisarudzwe, muzita raJesu.
14. Baba vangu, ratidzai zvakaipa zvese zvakagadzirirwa kurangana nehupenyu hwangu uye nekwavo, muzita raJesu.
15. Ini ndinosunungura kubva kune chero mweya wakaipa, muzita raJesu.
16. O Ishe, kana hupenyu hwangu huri munzira isiriyo, nditungamire izvozvi !!! Muzita raJesu
17. Ani naani anopesana nearitari yakagadzirirwa kupandukira neni ngaaparadzwe nemoto unotinhira waMwari, muzita raJesu.
18. Ndinoraira hupenyu hwangu kuti hushandurwe kuve hwakanakisisa, muzita raJesu.
19. Ruoko rwangu ngaruve pfumo remoto kutema miti yemadhimoni, muzita raJesu.
20. Masimba ese okuzvirumbidza akapiwa kwandiri, nyarara zvachose, muzita raJesu.
21. Ini ndinobvisa zvese zvakanaka zvangu kubva mumaoko evanondidzvinyirira, muzita raJesu.
22. Let all hold of the devil in my life be broken, muzita raJesu.
23. Rega simba rese ridzingise makomborero angu riite mitezo, muzita raJesu.
24. Chinhu chose chakanaka chakadyiwa nemuvengi ngachisukwe izvozvi, muzita raJesu.
25. Regedza kuzodzwa kwemweya kunowira pandiri zvino muzita raJesu
26. O Ishe, ndiitire munamato munyama muzita raJesu
27. Aiwa, Ishe, risai munamato wangu hupenyu nemoto Wako.
28. Ishe, podzai atari yangu yokunyengetera.
29. Ini ndinoramba kusvibiswa kwemweya kwese, muzita raJesu.
30. O Ishe, ndipeiwo simba rekukunda zvipingamupinyi zvese kukundikana kwangu muzita raJesu
31. O Ishe, dzorerai makore angu ashewa nezita raJesu
32. O Ishe, netsitsi dzenyu ndipeiwo mavambo matsva muzita raJesu.
33. Ini ndinoparidza kuti zvese zvakafa muhupenyu hwangu zvinodzoka kuupenyu muzita raJesu
34. O Ishe simuka uparadzire vese varikurwira rusununguko rwangu muzita raJesu
35. O Ishe, nerudo rusingaperi, ndinzwirei tsitsi mune zvese zvandinoita muzita raJesu
36. Wese muvengi muvengi anorwira hupenyu hwangu, aparadzwe izvozvi !!!, muzita raJesu.
37. Ini ndinoparidza kuti ini ndichaseka avo vakaseka kwandiri gore rino muzita raJesu.
38. Ini ndinoparidza kuti ini pandinosimuka neruoko rune simba rwaMwari, murume wese akaipa kana mukadzi anopesana newangu achawa muzita raJesu.
39. Ndinosimbisa kukunda kwangu neropa raJesu.
40. Ndinokutendai Tenzi Jesu nekupindura minamato yangu.
Previous nyaya30 minamato mikana yekukunda vavengi vako
inoteveraMakumi maviri eminamato yekutungamira kwaMwari uye nechirongwa
Zita rangu ndinonzi Mufundisi Ikechukwu Chinedum, ndiri Munhu waMwari, Une shungu nekufamba kwaMwari mumazuva ano ekupedzisira. Ndinotenda kuti Mwari vakapa simba kumutendi wese neakasiyana odhiyo yenyasha kuti aratidze simba reMweya Mutsvene. Ini ndinotenda kuti hapana muKristu anofanirwa kumanikidzwa nadhiyabhori, isu tine Simba rekurarama uye kufamba mukutonga kuburikidza neMinamato neShoko. Kuti uwane rumwe ruzivo kana kuraira, unogona kundibata pa chinedumadmob@gmail.com kana Nditaure neni paWhatsApp Uye Teregiramu pa + 2347032533703. Zvakare ini ndichada Kukukoka Iwe kuti ubatanidze yedu Inesimba Maawa makumi maviri nemana Maawa Ekunamatira Boka paTeregiramu. Dzvanya iyi link kuti ubatane Zvino, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ24vTXQ. Mwari vakukomborere.
RELATED DZOKUDZIDZAZVIMWE FROM AUTHOR
Dzinonamata Dzinonongedza Pakukanganisa Zvakaipa
Anonamata Anonamata Anopokana Nenhaka Yakaipa
Kunamata Kunongedzera Kupokana neMweya weDhivhisi
Olatunde Oladunni Nyamavhuvhu 12, 2021 Na 11:01 pm
Ndinokutendai nemunamato. Mwari awedzere chizoro chenyu changamire.
Beatrice Nyamavhuvhu 19, 2021 At 8:41 am
Mwari vakuropafadzei Muranda waMwari ..
Ndapota tumira maonero ako!
Ndapota tumira zita rako pano
Wakapinda kero ye email isina kururama!
Ndapota nyora email yako pano
Misimboti yeBhaibheri Yega Muzvinabhizinesi wemuBhizinesi Anofanira Kutevera
Zuva rega rega Nhungamiro Yekunamata
SUBSCRIBE TO YEMUYO WEYUCHI CHANNEL
BATIRANA NESU MAZUVA ANO UYE Komborerwa
30 minamato yeChinamato Chegore Idzva 2020
30 Pakati peManheru Minamato Pfungwa dzeMari Kuputsa
50 Hondo Yemunamato Pfungwa dzinopesana nemasimba erima.
Urongwa hwekuverenga Bhaibheri36
everydayprayerguide.com is webhusaiti yakatsaurirwa munamato. Tinotenda kuti kuti mukristu abudirire, iye / iye anofanirwa kupihwa minamato uye neshoko raMwari. Idzo minamato pane yedu webhusaiti ndeyekutungamira iwe sezvaunoshanda mukuvandudza hupenyu hwako hwemunamato. Isu tine hanya nevashandisi vedu, uye tinoda kuona ruoko rwaMwari ruchizorora pavari sekunyengetera. Saka wagamuchirwa sezvaunobatana nesu nhasi uye namata nesu, iye Mwari anopindura minamato achasangana newe padanho rezvaunoda muzita raJesu. Kugamuchirwa pane bhodhi. Mwari vakukomborere.
© Mazuva eseprayerguide 2019 | Kodzero dzose dzakachengetedzwa
Kunamata Kunongedzera Kukomborera Imba Idzva
Mapisarema 37 Zvinoreva Ndima Ndima
20 Kununurwa Pfungwa dzeMunamato Kubva kuMhepo dzeMvura yeMvura
Munamato Kune Vaya Vakapindwa Muropa Nezvinodhaka